သတင်းအချက်အလက်များ Overload သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေသည် Martech Zone
သတင်းအချက်အလက် Overload သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေသည်
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2012 ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2012 Douglas Karr
လုံးဝချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဤ blog post ကို နှင့်သူငယ်ချင်း Jascha Kaykas-Wolff ထံမှသတင်းအချက်အလက်။ Jascha သည်နှစ်ရှည်လများမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး Mindjet သည်ငါတို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ (မကြာမီဘလော့ဂ်ကိုစပွန်ဆာအဖြစ်!) ။ Mindjet သင်၏ဗျူဟာများကိုမြေပုံရေးရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကိုပေါင်းစပ်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖော်ထုတ်ရာတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်နေသည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အဲဒါဟာကြီးထွားလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပမာဏသာမကဘဲသူရဲ့အမြန်နှုန်းကိုလည်းပါ။ နံနက်ခင်းနှင့်ညနေပိုင်းစာတမ်းများသည်လူမှုသတင်းမီများနှင့်အွန်လိုင်းဆိုင်များတွင်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသတင်းများဖြတ်သန်းသွားသောသတင်းသံသရာသို့လမ်းလွဲသွားကာကေဘယ်သတင်းများပင်ကျန်ခဲ့သည်။ သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့သည့်လမ်းကြောင်းများမှာအကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်နေသည်။ အီးမေးလ်သတင်းလွှာများ၊ အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများ၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ချက်ချင်းစာပို့ခြင်း၊ RSS feeds၊ တွစ်တာစသည်တို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အင်တာနက်မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤပေါက်ကွဲမှုသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာအားလုံးပိုကောင်းတဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ဦး ဆောင်ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်မှာ၊ ဤသတင်းလွှမ်းမိုးမှုသည်နည်းများစွာဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်မျှသာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံတင်ပြချက်လည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနများနှင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြသောအခါ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွက်ချာပါဒ…ခေတ်သစ်သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်တမ်းတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောနေရာများတွင်အာရုံစူးစိုက်နေရသော်လည်းကုမ္ပဏီ၏အောက်ခြေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည်မှာသေချာသည်။
မှပုံ Overload JESS3.
3:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 7, 43
မစ္စတာ Karr ကောင်းတဲ့ post ကို .. 🙂